MALIA.HTM - ALIKA
Alika mitambatra Maltese / Shih Tzu mifangaro
Niko ilay Mal-Shi eo amin'ny 8 volana eo ho eo
mifangaro alika omby shiba inu
Ny Mal-Shi dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Maltais ary ny Shih Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
IDCR = Fisoratana anarana amin'ny Canine®
American Canine Hybrid Club = Mal-Shi
Registra ny famolavolana endrika = Mal Shi
Designer Dogs Kennel Club = Malti Tzu
Mpanoratra International Canine Registry®= Mal-Shi
'Hitanay i Braeden tamin'ny doka an-tserasera mila trano ASAP. Izany ny tranony FAHATELO . Ny tompona teo aloha dia nanana azy iray volana. 16 herinandro izy ary tsy nanana anarana, tsy nisy vozon'akanjo, tsy nifandray tamin'ny alika na olona hafa. Nanana Giardia, aretin-tsofina, tsy ampy lanja ary parasy ... tonga lafatra izy!
anglisy mastiff bernese dog dog mix
'Toa mamo izy ary Irlandy ... dia nijery azy aho ary nilaza hoe' toa Braeden ianao. ' Izany elaela ho an'i Braeden mifikira sy matokia . Mbola mianatra milalao alika kely hafa izy. Amin'izao 7 volana izao dia vonona kokoa hipetraka eo am-pofoako mandritra ny minitra vitsivitsy izy. Tia milalao fakana ary tia tsora-kazo tsara, mifanena amin'ny olona vaovao sy alika vaovao.
'Amin'ny valo volana, Braeden milanja 10,4 lbs., 17' ny halavany ary 10 ' lava eo an-tsoroka. Braeden dia manana toetra mampiavaka ny Shih Tzu: volo tri-olor, sofina tendrena, vatana lava kokoa ary io volo mahafatifaty eo ambonin'ny orony manondro io. Avy amin'ny Maltais, Braeden dia nahazo volo mahia manify, orona lava kokoa ary tsy manaikitra ambanin'ny mahazatra an'i Shih Tzus. Toa lehibe kokoa noho ny Maltese ny orony. Izy dia mety ho feno volom-borona ary mahazo doka amin'ny volony saika isan'andro. Na izany aza, manana Mal-Shi tsy misy 'pup pup' dia a fanoloran-tena amin'ny fikolokoloana . Voasoka amin'ny maraina sy alohan'ny hatory i Braeden. Indraindray dia ilaina ny fivoriana fanampiny mba hiasa moramora amin'ny fatotra izay mora hita eo ambaniny. Rehefa borosina isan'andro dia tsy matotra mihitsy izy. Mila manaraka fotsiny izany ianao. Mahazo fatra isan'andro ny anjely maso izy tondra-dranomaso , izay tena iraisan'ny Shih Tzu sy ny Maltese.
Atsofohy amin'ny maha alika alika azy ny mal-Shi tan sy fotsy amin'ny 10 herinandro
'Ny toetrany dia mitovy amin'ny Shih Tzu. Mpilalao fo miaraka amina alika hafa izy. Tiany ny mihazakazaka sy mitolona amin-kery Shi Tzus hafa . Tsy alika am-pofoana izy. Tiany ny mihaona alika vaovao ary tiany indrindra ny mahita olona vaovao. Toy ny ankamaroan'ny karazany, tena ilaina ny manao fanatanjahan-tena, na ara-batana na ara-tsaina. Izy mora amboarina amin'ny vilany mampiasa pady potty. Saingy nifindra haingana tany ivelany izy. Raha sendra tratry ny lozam-pifamoivoizana izy dia eo anelanelan'ny 7-9 hariva izay tsy mbola nijereko ny rano nisotroany tamin'ny sakafo hariva sy ny hariva. Haingana izy hianatra mipetraha, mijanona, mandry, mihozongozona, alaivo, avelao ary arotsany . '
Oreo ilay alika kely Mal-Shi mainty sy fotsy amin'ny 12 herinandro, milanja 3 pounds
karazana omby ao anaty lavaka sy sary
Oreo ilay alika kely Mal-Shi mainty sy fotsy amin'ny 19 volana, milanja 7 pounds
Alika kely Malshi (Maltese x Shih-Tzu mix) —Rocky milanja 2 pounds (fito herinandro) ary Muffy milanja efatra kilao (efa-bolana).
I 'Jaxon dia alika mifangaro Maltese / Shih Tzu. 4½ volana izy amin'ity sary ity. Tiany ny sain'ny olona sy ny olona, ​​mitsako karipetra, manoroka ny saka tiany (Bella), mandeha kely ary mitsabo. Tena tia olona sy sariaka amin'ny rehetra izy ary nilaza ny reniny fa manana toetra Shih Tzu bebe kokoa noho ny Maltese izy. '
Alikakely Jimmy-Mal-Shih (Maltese / Shih Tzu) 15 taona— 'Ny mpikambana vaovao indrindra amin'ny fianakavianay izay malala-tanana sy be fitiavana.'
alika rano portuguese miloko volontany
Bruno the Maltese / Shih Tzu cross (Mal-Shi) rehefa olon-dehibe
Bella, Mal-Shi (Maltese / Shih Tzu mix) mandritra ny 13 herinandro, milanja 3 ½ pounds
'Sofie dia Mal-Shi (Maltese / Shi Tzu mix). Manodidina ny 10 volana sy 8 lbs izy. eto amin'ity sary ity. '
Jereo ohatra misimisy momba ny Mal-Shi
Lisitry ny alika mifangaro Maltese
Lisitry ny alika mifangaro Shih Tzu mifangaro
Wolf malamute alika kely amidy
mpiandry ondry australianina mpiambina faritany collie mix
saint bernard black lab mix
lalan-dra amerikana pit bull terrier